I-AutoPitch: I-imeyile yokuZenzekelayo yaBameli boPhuhliso lweNtengiso Martech Zone
I-AutoPitch: I-imeyile yokuZenzekelayo yaBameli boPhuhliso lweNtengiso
NgoLwesine, Aprili 12, 2018 NgeCawa, ngo-Epreli 15, 2018 Douglas Karr
Kukho amaxesha amaninzi apho abameli bezentengiso banoluhlu olukhulu, kodwa iinzame ezifunekayo zokuthumela i-imeyile ngexesha zithatha umzamo omkhulu. I-AutoPitch idibanisa ngokuthe ngqo kunye ne-imeyile yakho, yenza ukuba kwenziwe itemplating, kwaye emva koko inike ingxelo ngayo nayiphi na imisebenzi okanye ukubandakanyeka ngokubhekisele kwezo imeyile. Unokuseta nokuthumela ngokulandelelana ukuthumela kuluhlu lwakho.
Ukutsala uluhlu lwengqele ebandayo kwiqonga le-imeyile kunokufumana inkampani kwinkathazo enkulu kunye nomboneleli wabo. I-AutoPitch ikuvumela ukuba uqhagamshele kwaye uthumele ii-imeyile ezizezakho ngqo kwiakhawunti yakho yeofisi.
Ulawulo lweeNkokeli -Bona iirekhodi zoqhakamshelwano, kwaye ujonge imbali yokunxibelelana kwindawo enye ukuze ukwazi ukulawula izikhokelo ngaphandle kwengxaki.
Ukudibanisa Imeyile -Iimpawu zokudibanisa imeyile kubandakanya ukulandelela okuvulekileyo, ucofe umkhondo, ukuhambisa iposi ngokwezifiso, ukuhlela, kunye nokunye.
itemplates Iitemplate ze-imeyile ekwabelwana ngazo, kwiqela lonke. Akukho sidingo sokutshintsha ukusuka kwesinye isicelo usise kwesinye. Yonke into endaweni enye!
Ukulandela ngokuzenzekelayo Yongeza inqanaba lokuphendula ngee-imeyile zokulandela ngokuzenzekelayo. Ukukhulisa ngakumbi ukukhokelela kunye nokwandisa ukusebenza ngokukuko.
Uluhlu loxinzelelo - Yongeza imimandla kunye nee-imeyile kuluhlu loxinzelelo, ukuthintela ukuphulwa kwe-CAN-SPAM.
imisebenzi -Yila, ucwangcise kwaye unike imisebenzi ongaze uphoswe kukulandela.
Unokusebenzisa i-AutoPitch yeqela lonke ngaphandle kweakhawunti enye. I-AutoPitch isebenza neGoogle Apps (i-Gmail), iMicrosoft Exchange, iOfisi 365, okanye nayiphi na i-imeyile esekwe kwi-SMTP.
tags: ukuqhuba ngokuzenzekelayoi-imeyile ezenzekelayoG Suiteinboxisizukulwana esikhokelayo365nembonoUluhlu lwemisebenzi yokuthengisaii-imeyile ezilandelelanayoSMTPUluhlu lokucinezela
I-2018 yoThengiso lweNzululwazi yeTekhnoloji yoLuntu iyaqhubeka ikhula ngakumbi nangakumbi
Yintoni ukuThengisa ngokuZenzekelayo?